Amabhishi amahle kakhulu eValencia ongeke uphuthelwe | Ukuhamba kwe-Absolut
Amabhishi amahle kakhulu eValencia
Umphakathi waseValencian ungenye yezindawo eziyizintandokazi lapho sicabanga ngesizini yehlobo. Kunamakhilomitha amaningi olwandle alula phakathi kwamakhona weparadesiacal kakhulu. Ngakho-ke kufanele sikhulume namuhla ngakho amabhishi amahle kakhulu eValencia. Izindawo okufanele uzivakashele!
Yize kuliqiniso lokho amakhilomitha olwandle Ziphansi kunezindawo zase-Andalusia, ngokwesibonelo, lokho akusho ukuthi zinobuhle obuhle. Futhi, eminyakeni embalwa eyedlule, kwathiwa umphakathi onamafulegi aluhlaza kakhulu. Inani elingama-125, elenze ezokuvakasha zikukhumbule lokhu lapho kukhethwa leyo ndawo yasehlobo.
1 Amabhishi amahle kakhulu eValencia, eNewfoundland
2 Ibhishi laseMuchavista
4 UCala Ambolo
5 I-Racó de la Mar
6 UPlaya Norte
7 Ibhishi laseL´Ahuir
8 Ibhishi laseCarregador
9 I-Albir Beach
Amabhishi amahle kakhulu eValencia, eNewfoundland
isitobhi sokuqala siseNewfoundland. Itholakala kufayela le- Idolobha lase-Oliva, engxenyeni esenyakatho. Kubandakanya ngaphezu kokhilomitha nengxenye lolwandle oluhle olunesihlabathi esihle. Yize ingenayo i-promenade, kuyiqiniso ukuthi ubuhle bayo ungabazisa ngamaphuzu ahlukahlukene. Ingenye yamabhishi amahle emindeni. Uma uzohamba nezingane, qaphela nolwandle lwaseTerranova, ngoba amanzi alo ngokuvamile azolile. Yize waziwa kakhulu, ngeke ukuthole kuminyene kakhulu.
Uma siya e-Alicante, sizothola ibhishi elibizwa ngeMuchavista. Ngokusobala kunjalo cishe amakhilomitha ayi-11 ukusuka enkabeni. Le ndawo inamakhilomitha angaphezu kwamathathu olwandle. Kokubili lokhu nolwandle lwaseSan Juan kunokugqwayiza okuningi. Ikakhulu ngesikhathi sehlobo ngoba banemigoqo eminingi yasolwandle, kanye nezindawo zokudlela nemisebenzi ehlukahlukene ongazijwayeza ngayo endaweni enjengale. Kuyiqiniso ukuthi ehlobo lingelinye lamabhishi avakashelwe kakhulu, ngakho-ke kuvamise ukuthi kugcwale kakhulu. Mhlawumbe ekupheleni kwentwasahlobo futhi nasekwindla, ungahamba kuwo futhi uzobona ukuthi kunempilo kangakanani.
Manje sekuyithuba likaCastellón. Uma sesifikile, sizohlangana Els terrers. Ingenye yalawo mabhishi anomumo omuhle wokuvikelwa ngokwengeziwe. Ngakho-ke, lapho kunomoya omncane, kungaba yindawo ekahle yokukujabulela. Ngamadwala abeke umsebenzi wokusebenza njengesihlangu kulowo moya okuthi, kwesinye isikhathi, konakalise ubuhle Ntambama ebhishi. Njengoba kuthule impela, kuphelele futhi ukuhamba nomndeni.
Yebo kuliqiniso ukuthi sikhuluma ngamabhishi, kepha kulokhu, asikwazanga ukushiya indawo enjengale. Kuyinto i-cove etholakala e-Alicante. Ngokuqondile, singasho ukuthi kusengxenyeni eseningizimu ye- ICabo de la Nao. Ayinakho ukufinyelela okulula njengakuqala. Lapha kuzodingeka wehle uchungechunge lwezitebhisi zamatshe ezidlula ezihlahleni. Ngaphandle kokungabaza, lokho kukodwa kufanelekile ukucatshangelwa. Yindawo encane, futhi lapho abantu abaningi bekhetha ukwenza ubunqunu.
I-Racó de la Mar
Sithatha ukweqa okuncane futhi kulokhu, sithola iRacó de la Mar, ibhishi eliseValencia. Ngokuqondile, kufayela le- umasipala weCanet D´En Berenguer. Ihluke kakhulu kwabanye abangane bayo, ngoba kuleli cala, inezindunduma ezilandelanayo. Ibuye ibe nemarina lapho ungajabulela izifundo zokuhamba ngomkhumbi kanye nokushaywa ngumoya.
La Ibhishi elisenyakatho yePeñíscola eCastellón Ingenye yamabhishi amahle kakhulu eValencia. Ingqikithi yamakhilomitha ama-5 esihlabathi ayinakuphutha. Ngaphezu kwalokho, lapha sinendawo ehamba phambili lapho singazijabulisa khona ohambweni lwethu. Ngenkathi ulele esihlabathini unemibono emangalisayo. Ngaphandle kokuqhubeka, inqaba kaPeñíscola imi buqamama
Kubhekwa njengenye yamabhishi amahle kakhulu eValencia. Kumele kuthiwe kunjalo eliseGandía. Yize kuliqiniso ukuthi mhlawumbe kusithekelwe kancane. Lokhu akuyona into embi, okuphambene nalokho, ngoba izuze uhlaza olukhulu kakhulu. Yindawo lapho kuvame ukuba khona nomoya. Imfanelo okungaba yinhlupho kwabaningi, kepha hhayi kwabanye. Ngakho-ke, kujwayelekile ukubona bonke labo abenza i-kite-surfing.
Ibhishi elibizwa ngeCarregador lingenye yamabhishi amahle kakhulu eValencia. Ukuze usithole, kufanele kuthiwe kusefayili ye- Inani lama-Alcocéber futhi inamamitha angaphezu kuka-850. Ngaphezu kokuba yindawo ebalulekile nenhle, kufanele futhi sisho nenani lemisebenzi etholakalayo. Yingakho wonke umuntu engafuni ukuphuthelwa lolu bhishi. Lapho uzothola kusuka ezikhathini zokuzivocavoca ukuya emidlalweni yabancane endlini. Imisebenzi eminingi nezinhlobonhlobo ezenza le ndawo ibe enye yezindawo ezivame kakhulu.
Enye yezindawo ezivame kakhulu ibizwa ngePlaya de Albir. Ngaphezu kwamatshe ayithwesa umqhele, kufanele futhi sisho amanzi awo amakristalu. Inhlanganisela yobuhle obuphelele eyenza ibe ngenye yamaphuzu amahle okuhlangana. Ngaphandle kokungabaza, kufanele sigqamise ifayela le- Izinhlobo zasemanzini ongakubabaza. Ngakho-ke, gqoka izibuko zakho zokuntywila futhi ujabulele imvelo ngokusemandleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Amabhishi amahle kakhulu eValencia